Masiibo Qaran iyo Hoggaan Fadhiid ah: Qaraxii Muqdisho - WardheerNews
Masiibo Qaran iyo Hoggaan Fadhiid ah: Qaraxii Muqdisho
Marka dhibaato ku dhacdo dad iyo dal, khaasatan dhinaca amniga, caqligu wuxuu ina siinaya in la is weydiiyo:
1) Maxaa keenay dhibta, ayaa mas’uul ka ah ama ka dambeeyay
2) Sidee ayay ku dhacday
3) Maxaa looga hor tegi kari waayay (where was the security breakdown)
4) Qorshe ku aadan sidii looga gaashaaman lahaa mustqbalka, iyo
5) Qorshe shaqo ka caydhis lagu sameeyo hoggaanka howlaha Amniga
Masiibadii Qaran ee ka dhacay Muqdisho Oktoober 14, 2017, ee ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 300 oo qof, islamarkaana ku dhaawacmeen in ka badan 200, ilaa haddana tiradu sii kordheyso, ayaa ilaa hadda mas’uuliyiintii Qaranku aanay sameyn wax qorshe daba gal ah.
M/weyne Farmaajo ( midig) iyo Kheyre
Xog badan oo ay soo ururisay WardheerNews, ayaa tilmaamya in dhamaan madaxdii dalku ay ku mashquuleeen howlaha gurmadka. Taasi oo ay aheyd in looga dambeeyo hay’addaha ku shuqulka leh taakuleynta iyo gurmadka, lana siiyo taageero buuxda si ay u fushaan una maareeyaan adeega hawlaha gargaarka.
” Howlihii Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka, iyo hay’addaha kaleeto ee khibradda u lahaa ayaa dhamaan shaqadoodii adeegu ay gaabis noqotay, oo tayaddii hoos u dhacday” Sidaa waxaa WardheerNews u sheegay mas’uul ka tirsan Gargaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxa Muqdisho.
Mas’uulka ayaa intaas ku daray ” waxa dhacday in Ra’iisal Wasaarihii , Wasiiraddii iyo mas’uuliyiin kaleeto iyaga oo wata ciidan tiro badan, ay buuxiyeen goobtii masiibadu ka dhacday, oo gacmaha la galeen howsha gurmadka, iyaga oo bixinaya amar (orders), taasi oo keentay in gaabis ama hoos u dhac ku yimaado maamulkii iyo maaareyntii gargaarkii ee loo fidin lahaa dadka qaraxa ku waxyeeloobay.
Xukuumaddu ilaa hadda lama ay iman wax qorshe ah oo darsaya sida ay wax u dhaceen iyo sidii looga hor tegi lahaa (leadership role). Halkii ay shir degdeg ah (emergency meeting) iskugu iman lahaayeen, ayay xitaa baajiyeen shir asbuuceedkii golaha Wasiiradda. Taasi oo muujinaysa qorshe iyo hoggaan la’aanta ka jirta xukuumadda Soomaaliya.
Waxa xusid muddan, inkasta oo uu madaxweynuhu markii la soo dorrtay uu bishii Abril ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah kooxda Al Shabaab, ilaa hadda ma jiro wax dagaal ah, oo muuqda oo lagu qaaday Al shabaab.
Run ahaantii Al Shabaab ayaa xoojisay dhawaanahan dagaalka, iyaga oo dib u qabsaday goobo hore looga kacshay, sida Bariire, dagaalo kalena ku qaaday goobo badan oo ka tirsan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed bishii Ogost -Sebtember ee 2017-kii.
Dad badan oo masuuliyiin ah ayaa u sheegay WardheerNews, in qaraxa Muqdisho iyo xaaladda ammaan darada sii kordheysa ay muujinayso habac-sanaanta hoggaanka dalka, iyaga oo sheegay in masiibada qaraxa iyo arinkii Qalbi Dhagax ay marag cad u noqon karto fadhiid-nimadda hoggaanka dalka ee wakhtigan xasaasiga ah.
Dowladdu haddii ay ka go’antahay in ay wax ka qabato ammaanka dalka waa:
In is-badal degdeg ah lagu sameeyo hoggaanka Waaraddaha iyo hay’addaha Amaanka iyo nabad suggida, kuwaasi oo ku fashilmay gudashada howlihii loo igmaday
In xisaabtan dhab ah lala galo hay’addaha ku lugta leh Ammaanka dalka
In hoggaanka Amniga loo igmado dad karti iyo aqoon u leh
In la joojiyo lana so af jaro xiisada Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada
In la soo celiyo dagaalkii dib u xoreynta deegaanada ay gacantu ku heyso Al Shabaab ee ay wadajirka u wadeen AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya.
In dib u eegis lagu sameeyo caqabadaha hor taagan dib u dhiska iyo qalabeynta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed
In loo qoondeeyo dhaqaale joogta ah oo lagu howgeliyo Ciidanka dalka
In qorshe Qaran loo sameeyo tayeynta iyo dib u dhiska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed
One Response to “Masiibo Qaran iyo Hoggaan Fadhiid ah: Qaraxii Muqdisho”